Xiisad Colaadeed oo ka taagan gobolka Mudug. | Puntland Vision
Xiisad Colaadeed oo ka taagan gobolka Mudug.
iyadoo tan markii laga soo noqday dagaaladii shacabka looga saaray gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka ay isku dagaaleen Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa waxaa ku sugnaa magaaladaasi ciidamada ka socda kuwa dawlda federalka Soomaaliya.
Suuqyada iyo Koonaha magaalada ayaa waxaa Saldhigyo kuleh Ciidamo laga kala keenay maamuladaasi iyo kuwo ka tirsan kuwa dawlada federalka Soomaaliya kuwaasoo isugu jira Milatari iyo Boolis kuna hawlgan Amniga gobolka Mudug.
laga Bilaabo 1 Bishan Augusto gobolka Mudug waxaa kasoo cusboonaaday xiisado Calaadeed iyo sidoo kale Dagaal looga cabsi qabo inuu markale ka dhaco gobolka kasoo u dhexeeya Maamulada Puntland iyo Galmudug.
Ilaa 5 Tuulo oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa looga tooghayey Colaada maanta ka dhacday Barigga magaalada Gaalkacyo taasoo kabilaatay dhul kamid ah Agaagarka Garoonka Diyaraha C/laahi Yuusuf Airpor ee Magaalada Gaalkacyo.
Saddexdii Habeen ee lasoo dhaafay ayaa dhaq dhaqaaqyo Cabsi ah ay ka jireen Bariga iyo Koonfurta gobolka Mudug kuwaasoo looga toog hayey Cabsida kadib markii la helay Xog ku Aadan Coladaasi inay markale gobolka kusoo wajahantahay.
Dhankale Arintii maanta ka dhacay Barigga magaalada Gaalkacyo ayaa abuurtay Xiisad Colaadeed taasoo loogu baaqay labada dhanba inay ilaaliyaan Amniga gobolka isla markaasna ay soo qabtaan gacan ku dhiiglayaashii dilka ka gaystay agagarka Garoonka diyaraha Gaalkacyo.